Friza ọkpa → Uwe ụlọ ahịa oyi • Ihe mkpuchi kọmputa P&M
Friza ogologo ọkpa maka ọrụ pụrụ iche
Igwe nju oyi na uwe ụlọ ahịa oyi pm.com.pl bụ uwe dịgasị iche iche zuru oke maka ọnọdụ siri ike. Ihe atumatu egosiputara nke ihe kachasi nma na eme ka aru oru n’ime onodu di ala n’adighi nma. Traụza friza bụ otu n'ime ihe dị iche iche nke uwe ndị ọkachamara maka ịrụ ọrụ na ọnọdụ ọrụ siri ike.
Aka nri na Jaketị na Akpụkpọ ụkwụ ụlọ ahịa oyi bụ akụkụ kachasị mkpa nke akụrụngwa onye ọrụ. Na anyị ụlọ ahịa na peeji nke, oyi ụlọ ahịa uwe e jiri nlezianya na categorized maka ngwa ngwa na mfe nchọ.
Gwara mmanụ dungarees echekwara maka mgbochi megide oyi ruo -45 Celsius
Freezer ogologo ọkpa dị na nha site na S ruo 3XL, na ụdị ha zuru ụwa ọnụ dabara maka ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke. Dungarees bụ uwe a họọrọ iji mee ka ahụ dịkwuo ọkụ ma kwe ka nnwere onwe imegharị.
Onye nrụpụta ahụ nyere ụdị dị iche iche agba (dịka acha anụnụ anụnụ, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, acha anụnụ anụnụ) na ụdị nwere obere usoro n'ụdị eriri agba. Pricegwọ mpi bụ azịza ziri ezi maka ndị mmadụ na-achọ azịza akụ na ụba, yana mgbe ị na-azụ nnukwu ọnụọgụ, ọ ga-ekwe omume ịwepụ ego ọzọ.
Hi-Glo 25 Coldstore ogologo ọkpa, nchebe ruo -64 Celsius
Friza na oyi akwa uwe ogologo ọkpa - nhọrọ nchekwa
Pants maka ime ụlọ oyi na friza ejiri ihe ahọpụtara ahọpụtara dịka owu ma ọ bụ polyester, iji kpuchido oyi ọbụlagodi -64 degrees C. fereddị ndị a na-enye nwere bọtịnụ dị mma, akpa, ndị na-agbanwe agbanwe maka nkasi obi kasịnụ Ogologo ọkpa nwere asambodo nke nkwekọ na-egosi na ha emezigharị iji rụọ ọrụ na obere okpomọkụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhazi uwe gị, ị nwere ike wepụta ngwa ahịa ihe mkpuchi kọmputa ma ọ bụ ihuenyo ebi akwụkwọ jiri eserese gị, aha ụlọ ọrụ, aha ma ọ bụ ọnọdụ gị. Ọ bụ azịza zuru oke maka ndị chọrọ ịmepụta onyonyo nwere njikọ nke ụlọ ọrụ.
Anyị nwere ogige igwenke a na-enye anyị ohere ijikwa akara ahụ na ọkwa ọ bụla nke ọrụ ahụ ma meghachi omume ozugbo na mgbanwe ọ bụla. Ndị ọrụ anyị nwere ahụmahụ ga-enyere aka na nhọpụta nke ngwaahịa ma nye anyị nyocha akara ngosi n'efu.
Uwe mkpuchi ụlọ ahịa oyi